Torohevitra 5 hanaovana logo matihanina | Famoronana an-tserasera
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba izany isika toetra lehibe izay tsy maintsy ananan'ny singa manan-danja indrindra ny fifandraisana sy ny endrika orinasa, ny modely; Ireto misy torohevitra 5 momba ny fanaovana sary famantarana matihanina.
Rehefa manomboka dia tsy maintsy tadidinao izany io no ho sarinao ho an'ny besinimaro sy ny mpanjifanao ho avy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fananana logo tsara, io singa io no mamaritra ny orinasanao.
Hanao sary famantarana teboka manan-danja maromaro no tsy maintsy raisina, Momba ny estetika, endrika ary loko. Ny tsirairay amin'ireo teboka ireo dia tsy maintsy raisina hatramin'ny arakaraka ny sary an'ohatra sy ny psikolojia ao amin'ny kolotsaina tsirairay avy dia afaka miovaova ny dikany. Raha iraisam-pirenena na miatrika mpanjifa iraisam-pirenena ny orinasanao dia mila jerena ireo fiovana ireo.
Amin'ny maha toro-hevitra voalohany antsika dia tsy maintsy asongadintsika ny zava-dehibe indrindra araka ny hevitro. Ny sary famantarana ho mahasarika maso sy manintona. Tsy maintsy mifantoka amin'ny mpihaino kendrena ny sary famantarana anao, ho fanampin'izany, tsy maintsy manana ny kalitaon'ny fisarihana ny saina amin'ny hafa izy ary miavaka. Mety ho vitsivitsy singa solontena izay manondro ny momba ny orinasa na singa iray izay tadidinao noho ny tandindony. Ohatra, omby marika Red Bull, izay manondro tanjaka.
Ny sary famantarana tsy maintsy miavaka sy am-boalohany, tsy maintsy miavaka amin'ny ambiny. Andramo ny endrika samihafa, ohatra ny endrika biolojika na geometrika kokoa, miankina amin'ny lohahevitry ny orinasa.
Torohevitra iray lehibe sy lehibe hafa koa ny tsy maintsy ananan'ny fango anao maharitra sy maharitra. Raha fotoana fohy ny logo anao, dia ho fampiasam-bola very izany. Tokony hamporisihinao ny olona hahatadidy anao sy hamantatra ny orinasa amin'ny alàlan'ny sary famantarana.
Tokony hialana amin'ny habetsaky ny singa, ny sary famantarana Tokony ho tsotra, madio ary indray mipi-maso izy io. Tokony hampita hafatra mivantana izy io. Ny be loatra amin'ny singa, afaka manome ny sarin'ny tsy firaharahana sy ny tsy fandaminana.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny logo ianao dia afaka mandeha eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra 5 hanaovana logo famantarana matihanina